Qoorqoor iyo Cabdikariin Guuleed oo Istanbul ku kulmay – news
Qoorqoor iyo Cabdikariin Guuleed oo Istanbul ku kulmay
Kulanka ayaa ahaa mid is xog wareysi ah oo looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan tan Galmudug.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa magaalada Istanbul ee dalka Turkiga kula kulmay madaxweynihii hore ee maamulkaas Cabdikariin Xuseen Guuleed oo isna ku sugan magaalada.
Kulanka labada masuul ayaa ahaa mid is xog wareysi ah, waxaana looga hadlay xaaladda guud ee siyaasadda dalka gaar Galmudug oo dhawaan is bedel ka curtay.
Waxaan magaaladda Istanbul ee wadanka Turkiga ku kullanay madaxweynaha Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye Qoor Qoor, waxaana ka wadahadalnay xaaladdihii ugu dambeeyay ee dalka iyo arrimaha hortabinta leh. Sidoo kale madaxweyne Qoor Qoor waxaan ku boggaadiyay howlihii wanaagsanaa ee uu muddada kooban ka qabtay deegaannada Galmudug, anigoo ku dhiiri-galiyay in lasii labo jibaaro."ayuu yiri Cabdikariin Guuleed.
Sidoo kale kulanka labada masuul ayaa looga hadlay qabsoomidda shirka wejiga saddexaad ee Dhuusamareeb, kaas oo u dhaxeeyo madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada, lana filayo in uu dhaco 15 bishan, walow aan diyaar garow muuqan.
”Galmudug waxey hadda udub dhexaad u tahay siyaasadda kala guurka ah ee Soomaaliya, waxaana isha lagu wada hayaa shirka Dhuusamareeb 3. Madaxweyne Qoor Qoor waxaan isla soo qaadnay inuu shirkaasi xilligiisa ku qabsoomo iyo inuu dhexda u xirto iney kasoo baxaan go,aamo Soomaalidu raali ka wada tahay oo jidka u xaara iney doorashadu noqoto mid lagu wada qanacsan yahay oo xiligeeddana ku dhacda.” ayuu yiri Guuleed.
Madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa wado la tashiyo uu la sameynayo dhinacyada ay quseyso siyaaaadda Galmudug, waxaa uuna horey heshiisyo ula galay xubnihii ayidsanaa doorashadii oo la aaminsanyahay in ay tanaasul buuxa u sameeyeen.
Warar 27 September 2020 17:20